इजाले हाम्रो जन्मदर्ता गरिदिएको घरलाई गाविस भवन भन्छन्। काडामाण्डौं गाविस। हो, बाज्ये त्यही गाविसको पियन हुनुहुन्थ्यो। चार वर्ष भयो बाज्ये काममा नजानुभएको। अँ, पेन्सन पाक्यो रे बाज्येको। बाज्येका ठाउँमा बाबाले त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। स्कुल छुट्टी भएको बेला म बाबासँग त्यहाँ जान्थें। बाबाका सरले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। उनै सरको सल्लाह र आडमा बाबाले भाइलाई उपचार गर्न धनगढी लिएर जानुभएको थियो। आज सप्पै आउँदै थिए। त्यसैले बिहानैदेखि भेट्न हतार गरिरहेकी थिएँ। अझ भाइलाई भेट्न आत्तिएकी थिएँ।
राम आउँदैन भन्नेबित्तिकै मलाई झ्याउ लाग्यो । ऊ भएपछि पढ्न खुब मन लाग्थ्यो। नआएको पाठ पनि मज्जाले सिकाउँथ्यो। हामी एकै कक्षामा एउटै बेन्चमा बसेर पढ्थ्यौं । घरमा पनि सँगैसँगै हुन्थ्यो। “केइ ?” मैले भनें।“इजासित गडा गयाछ भन्यो।”बारीमा गएको सुनेर चुपचाप भए। खोलेको किताबतिर हेर्नै मन लागेन। तलामाथिको झ्याल खोलें। र, तगारोतिर हेरें। तगारोले छोएको बाटोभरि हेरें। राम आउँदैछ कि भनेर हेरें।
राम प्रायः एक्कासि आउँथ्यो। “हट् !” तर्साउला झैं भन्थ्यो। हामी चिरिर्र चिच्याउँदै एकैठाउँमा गुट्मुटिन्थ्यौं।
“ए कला, कला!”बाज्ये मकै गोड्दागोड्दै कराउनुभो। माथिल्लो झ्यालबाट पढ्दैछु भनें। पढेनपढेको विचार गर्न बाज्येले बेलाबेला डाको लगाउनुहुन्थ्यो। बाज्येलाई किताब समाएर झ्यालबाटै देखाएँ। खिस्स हाँसेझैं गर्नुभो। बाज्येको निधारको पसिनामा घामको प्रकाश टिलिक्क टल्कियो। कोदाली छोडेर पसिना पुछ्दै लामो सुस्केरा हाल्नुभो बाज्येले।
“ए कला, आज तेरा ब्वा आउन्या हुन्?”रामीकाकाले आँगनबाटै बोलेको सुनें। पुलुक्क हेर्दै भनें— “अँ अँ, आउन्या हुन्।”उनी बाख्रोलाई बोको लगाउन आएका थिए। बाख्रोमाथि बोकोलाई चढाएको देखेर हीरालाई कोट्याएँ। हीराले तल पुलुक्क हेरी। अलिकति लाज मानेर मलाई चिमोटी।
“कला, ए कला! इस्कुल झाऊ ला।” राम कराएको सुनें।माथिल्लो तलाको झ्यालबाट पुलुक्क हेरें। मसँगै हीराले पनि हेरी। ऊ त स्कुलको ड्रेस लगाएर आइसकेको थियो। तगारोमा उभिएर हे¥यो मात्रै। पढ्दापढ्दै नौ बजेको थाहै भएनछ हामीलाई।
हीरा तल हतारिएर गई। आफूलाई भने राम हेर्न ठिक्कै।“कला, छिट्टाइ आ। मु गया,” तगारोछेउबाट हीरा कराई।
राम पनि पछिपछि जान लागेको देखेर भनें— “राम, पख्न! सातै झाउली!”ऊ आएर खाटमा थपक्क बस्यो। बाज्येअघि गम्भीर भएर बस्थ्यो। बाज्येसँग ऊ पनि डराउँथ्यो।
आइँऽ आइँऽऽभैंसी करायो। सुसारे खोजेको होला। तर इजा आइपुग्नुभएको थिएन। मैले थाहा पाएदेखि इजा मात्रै घाँस काट्न गएको देखेकी थिएँ। तर दूध बेच्न भने बाज्ये मात्रै जानुहुन्थ्यो। दूध बेचेरै तेरा बाबालाई पढाएको हुँ भन्नुहुन्थ्यो। दही मथ्ने, पारो धुने, घ्यु बनाउनेचाहिँ बज्यैले गर्नुहुन्थ्यो।
हाम्रो गाउँतिर त बोका त के चेली पनि छाडा छोडिदिन्थे। तिनलाई द्यौकी मान्दथे। निङ्गलासैनी देवीको मन्दिरतिर द्यौकीहरु अझै पनि भेटिन्छन् रे। ती द्यौकीहरु पनि मन्दिरलाई चढाइएका हुन् रे। बिचरा द्यौकीहरु गाउँ रूँघेर बस्थे। बज्यैले भनेकिन् मन्दिरकै हाताभित्र लुटिन्थे रे द्यौकीहरु। म्याँऽ म्याँऽऽतगारोतिर दौडिँदै बोका करायो। त्यतैबाट घाँसको डोका बोकेर आउनुभएको इजालाई देखें।
थाप्लोको पछ्यौराले फेरि मुख पुछ्नुभयो। मैले पानी लगेर दिएँ। टाँडको छेवैमा बसेर पानी पिउँदै मलाई हेर्नुभयो। “इस्कुल झान लागेइ होइ?”मैले टाउको तल गर्दै “अँ” भनें।“भात खाहाली ?” फेरि सोध्नुभयो इजाले। खाइसकें भने। इजा थकाइमा पनि मुस्कुराउनुभयो अनुहारभरि। मलाई काखमा राखेर नमिलेको कपाल अझै मिलाएर बाँधिदिनुभयो। इजाको गालामा चुप्प खाइदिएँ।
रामले खेल्दाखेल्दै पछि आउँछु भन्यो। हीरा पनि मसँगै नजाने भई। खिन्न भएर झोला भिरें। म हिँडें एक्लै घरतिर लुरूलुरू। प्रकाशित मिति:
मंगलबार, पौष ५, २०७३ १७:१२:१७